Sarimihetsika : Hivoaka kapila mangirana ny « Ziogan’i Benja Kely » -
AccueilVaovao SamihafaSarimihetsika : Hivoaka kapila mangirana ny « Ziogan’i Benja Kely »
Sarimihetsika : Hivoaka kapila mangirana ny « Ziogan’i Benja Kely »
24/10/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Andiany faha-2 tamin’ny tantaran’i Benja, tovolahy iray namono ny zanany ka notanana teny amin’ny fonjan’Antanimora. Hivoaka kapila mangirana ny alarobia 25 oktobra izao ny « Benja Kely 2 : zioga », izay tohin’ny tantara taorian’ny famitany ny saziny teny Antanimora, sy ny naharavan’ny rivo-doza ny toeram-ponenany,ka nanombohany fiainana vaovao tao anatin’ny fahantrana sy ny fahasahiranana. Nampiavaka ity horonantsary ity, na tamin’ny andiany voalohany, na ity andiany faharoa ity, dia ny fanatontosana ny horonantsary tena tao anatin’ny zava-misy, na ny toerana, na ny zava-mitranga nanodidina izany (orana, fonja…). « Nisy ampahan’ny tantara dia notontosaina teny amin’ny fonjan’Antanimora, ary nisy ireo tena mpandraharahan’ny fonja niara-niasa taminay », araka ny fanazavan’ny Maki prod, mpamokatra ny horonantsary. « Manodidina ny 1500 izay mpandray anjara tao anatin’ny tantara ankoatra ireo mpilalao fofotra ». Ankoatra ny maha fialamboly ny horonantsary, anisan’ireo tantara mampihetsi-po, ary nandrotsaka ranomason’olona maro ny « Benja Kely ».
Taorian’ny fampisehoana ny horonantsary tany anaty efitrano nanomboka ny volana jona lasa teo, dia ny alarobia no afaka hisitraka ny tantara ireo tsy afaka-nijery izany. Hita ao anatin’ny tantara « Benja Kely » ihany koa ny fahaizan’ireo mpilalao tsy zoviana eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika toa an-dry Tsarafara, Aimée…